ပုလောမြို့နယ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်တွင် ပါဝင်သည့် မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပုလောမြို့နယ်တွင် ပလမြို့၊ ပုလောမြို့နှင့် ပလောက်မြို့တို့ ပါဝင်ပြီး မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာမြို့မှာ ပုလောမြို့ ဖြစ်သည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 13°07′N 98°41′E
၂၆၃၃.၈၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀၁၆.၉၂ စတုရန်းမိုင်)
၂၀၁၁ ခုနှစ် စာရင်းများအရ ပုလောမြို့နယ်တွင် ခုတင် ၅၀ မြို့နယ်ဆေးရုံ တစ်ခု၊ ၁၆ ခုတင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ ငါးခု၊ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန တစ်ခု၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန တစ်ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ခြောက်ခုနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၅ ခု ရှိသည်။
ပုလောမြို့နယ်အနီး အရှေ့ဘက် ပုလောချောင်း ပုလောနှင့် နန်းတောင် အကြား လွင်ပြင်၊ မကျည်းကုန်း လယ်ကွင်း မြောင်းဖောက် တို့သည် သစ်နုမြေရိပ်များ ဖြစ်ကြရာ ပုလောမြို့နယ်နှင့် မော်သာယာ တောင်တန်း တို့သည် ယခင်က ကျွန်း တစ်ကျွန်းဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ ပသျှူးဘာသာ စကား ဖြင့်(ပုလို) မြန်မာ အဓိပ္ပာယ်ကျွန်းဟု ခေါ်ဆိုကြရာ ယခုအခါ ပုလောဟု အမည်တွင်လာပါသည်။ (၁၆)ရာစုမှ(၁၇)ရာစု အတွင်း ပုလော မြို့နယ်တွင် ဝင်ရောက် နေထိုင်သူများ သည် မြောက်ဘက် ဒေသတွင် ဗမာ၊ ကရင်၊ ယိုးဒယား (ရှမ်း)လူမျိုးများ နေထိုင်ကြ ဟန်ရှိပါ သည်။ (၁၈၀၈ - ၁၈၂၄) ခုနှစ်တွင် ထားဝယ်မြို့၌ ပုန်ကန်မှု များ ဖြစ်ပွား သဖြင့် ထားဝယ်သား အမြောက်အများ ယခု ပုလော မြို့နယ် တည်နေရာ သို့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ ပုလောမြို့သည် မြို့နယ် ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ကျရောက်ပြီး မြို့နယ် အတွင်း ကုန်လမ်း၊ ရေလမ်းဖြင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ် သွားလာနိုင်ပါသည်။ ပြည်ထဲ ရေး နှင့် သာသနာ ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၀.၆.၇၂) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၁၃/၂၇/ စိတ် (၁)ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ မြို့အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့ပါ သည်။
ပလောက်မြို့တည်ရှိရာနေရာသည် ရှေးကပင်လယ်ပြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီ လူမျိုးများ ကုန်စည် သင်္ဘော များဖြင့် ၀င်ထွက် သွားလာစဉ် သင်္ဘော တစ်စီးမှာ ရှင်မကန် ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိပြီး နစ်မြှုပ်ခဲ့ သည်။ သင်္ဘောနစ်မြှုပ်ရာနေရာတွင် ရေတိမ် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ထား၀ယ် ဒေသမှ ဗမာလူမျိုးများ စတင် ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယိုးဒယား ဘုရင်၏ ကျုးကျော်သိမ်းပိုက်မှုအား အလောင်းမင်းတရားကြီး ချီတက်ရာတွင် ယခု ပလောက် နေရာတွင် စခန်းတစ်ထောက် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။ ရပ်နား စဉ် စစ်သည် ရဲမက် များ ထမင်းစားကြရာ ထမင်း မလောက်သဖြင့် မလောက်ရွာဟု အမည်ပေးခဲ့ရာမှ ကာလ ရွှေ့လျား လာသည့် အခါ ပလောက်ဟုအမည်တွင် လာပါသည်။ (ယခင်ပုလောမြို့နယ်၏ ရပ်ကွက် (၅)ခု၊ကျေးရွာအုပ်စု (၂၇)ခု၊ ကျေးရွာ ခွဲ (၃၁)ရွာ၊ အိမ်ခြေ (၅၁၆၂)၊ အိမ်ထောင်စု (၅၂၀၂)၊ လူဦးရေ (၂၇၉၆၉)ဦးဖြင့် ပုလောမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (၁.၁၁.၂၀၀၂) ရက်စွဲပါ အမှုတွဲအမှတ် (၂/၂၀၀၂-၂၀၀၃)ဖြင့် တင်ပြချက် အရ အသစ်ဖွဲ့စည်း လိုက်ပြီး (၁၀.၄.၂၀၀၃) ရက်နေ့မှစ၍ မြို့နယ်ခွဲ အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ကာ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အထက် အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ အား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ (၁၅.၇.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၀/ ၆-၃၆/(၉၉၂)/ရေး ၁ (အထဥ) အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် (၃၂၇/၂၀၁၄) ဖြင့် မြို့နယ်ခွဲကိုဖျက်သိမ်း၍ ပလောက် မြို့ အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်၍ မြို့ရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပလမြို့တည်ရှိရာနေရာသည် တိုကျေးရွာနှင့် ပလကျေးရွာ တို့ အားစုပေါင်း၍ ပလမြို့ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ တိုကျေးရွာသည် (၁၇၅၂) ခုနှစ်အချိန်ခန့်က အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ သည် ယိုးဒယားသို့ စစ်ချီသွားရာတွင် တို ကျေးရွာ၌ ယိုးဒယားတပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယိုးဒယားတပ် ၏ လက်ချက်ဖြင့် တပ်မှူးတစ်ဦး၏ လက်တစ်ဖက် ပြတ်သွား ခဲ့ရာမှ ငလက်တိုရွာဟုအမည်တွင်ပြီး နှစ်ကာလ ရွေ့လျား လာခဲ့ရာမှ တိုရွာဟု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ပလကျေးရွာသည် (၁၇၆၀) ခုနှစ်ခန့်က ပုလောမြို့ (ယခင်) ပူရိယက္ခမြို့၏ အခွန် အခဆက်သ၍ အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီး ပူရိယက္ခမြို့စားများ လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည့် ရွာတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ရာ ၄င်းပလရွာရှိ မိန်းမများသည် လှပကျော့ရှင်းသဖြင့် မြို့စား၊ နယ်စား များမှ မလှရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပြီး နှစ်ကာလရှည်လျားလာသည့်အခါ ပလရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တိုကျေးရွာ အုပ်စုတွင် သင်္ကန်း တောရွာ၊ တန်းရှင်းရွာ၊ ပိတပ်ရွာ၊ တိုကျေးရွာ (၄)ရွာအနက်မှ တိုကျေးရွာအား အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်နှင့် အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ပလကျေးရွာအုပ်စုတွင် မင်းပြင်ရွာ၊ ဘိုင်းပြင် ရွာ၊ တလင်းမိုတောင်ရွာ၊ ပလရွာ (၄)ရွာအနက်မှ ပလကျေးရွာအား အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် နှင့် အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စုစုပေါင်း ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက် ပေါင်းစည်းပြီး ပလမြို့အဖြစ် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၂၀/၂၀၁၆) ဖြင့် (၂၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပလမြို့အဖြစ် ဖွဲ့စည်း သတ်မှတ် အတည်ပြု လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်၏တည်နေရာသည် မြောက်လတ္တီ တွဒ် ၁၂ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်နှင့် ၁၃ ဒီဂရီ ၂၈ မိနစ် အကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီ တွဒ် ၉၈ ဒီဂရီ ၃၃ မိနစ်နှင့် ၉၈ ဒီဂရီ ၅၂ မိနစ် အကြားဖြစ်ကာ အရှေ့အနောက် ၆၅မိုင် နှင့် တောင်မြောက် ၅၄ မိုင်ရှည်လျားပြီး ၁၀၁၆ ဒသမ ၉၂ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းကာ မြို့နယ်ဧရိယာ ၂၀ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းကို သစ်တောများက ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့ ၆၅ မိုင်ရှိပြီး တောင်မှ မြောက်သို့ ၅၄ မိုင် ရှိပါသည်။ ပုလောမြို့ ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် (၂.၇၃) မိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စတုရန်းမိုင်(၉၉၁.၃၂)မိုင် ရှိသည်။ ထားဝယ်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ယွန်းယွန်းသို့ ၁၅၈ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။
ပုလောမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ အနောက် ဘက် တွင် ကပ္ပလီပင်လယ်၊ တောင်ဘက်တွင် မြိတ်မြို့ နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် သရက်ချောင်းမြို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ် လျက်ရှိပါ သည်။
ပုလောမြို့နယ်သည် မြေမျက်နှာပြင်ကို အရှေ့ဘက် တောင်တန်း ဒေသ၊ ကမ်းမြောင်လွင်ပြင်ဒေသ၊ ပင်လယ်တွင်းရှိ ကျွန်းများ ဒေသတို့ ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်တောင်တန်းဒေသသည် အရှေ့ဘက် တနင်္သာရီဒေသ တို့နှင့် ပိုင်းခြားထားသော နယ်ခြား တောင် ကျွန်းမကြီးတစ်လျှောက်မှ အနောက်ဘက်မြေပြင်ဒေသထိ ကျယ်ပြန့် သည်။ မြင့်မားသော တောင်များပါဝင်ပြီး မြောက်ဘက် တွင် မြင့်မားပြီး ပေ(၆၀၀၀)ကျော်မှ တောင်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း နှင့် ပေ(၂၀၀၀)ကျော်အထိ နိမ့်ဆင်း သွားသည်။ ပုလောမြို့နယ်၏အမြင့်ဆုံးတောင်မှာ မှိုတောင်ဖြစ်ပြီး ပေ(၄၂၃၀)အမြင့်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက် တောင်ကျွန်းတွင် မြင့်မားပြီး၊ တောင်ဘက်သို့ နိမ့်ဆင်းသွားသည်။ တောင်တန်း ဒေသသည် အကျယ်ဆုံးမှာ (၁၂)မိုင်၊ အကျဉ်း ဆုံးမှာ (၁၀)မိုင် ခန့်ရှိပါသည်။ ပုလောမြို့နယ် ကုန်းပိုင်းဒေသ ၏ (၂၁.၄၅) ရာခိုင်မှုန်း ပါဝင်သည်။ ကမ်းမြောင်လွင်ပြင်ဒေသသည် အရှေ့ ဘက် တောင်တန်းဒေသ နှင့် အနောက်ဘက် ကပ္ပလီ ပင်လယ် အကြား တည်ရှိပြီး တောင်ကုန်းအနိမ့်များပါဝင်သည့် လွင်ပြင် ဒေသ ကို ခေါ်သည်။ မြောက်ဘက်အကျဆုံး အပိုင်းမှာ (၂)မိုင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ကျန်သော ဒေသအချို့မှာ (၁)မိုင်မှ (၂)မိုင်ထိ ကျယ်ပြန့်သော လွင်ပြင် များပါဝင်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် ကျယ်ပြန့် သော လွင်ပြင်ဒေသနှင့် ဒီရေရောက် တောဒေသ၊ မင်းကကြဲ အနီးနှင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် လည်းကောင်း၊ ရှပ်ပုံနှင့် ပုလော အနီးတစ်ဝိုက် မြဒေါင်၊ ပလတို့တွင် လွင်ပြင်များတွေ့ရပြီး မြောက်နှင့်တောင် မြေနိမ့်ဒေသတွင် ဒီရေရောက် တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ပင်လယ်ကျွန်းများတွင် မလိ ကျွန်းငယ်၊ ပုလောကတက်ကျွန်း၊ ပိန္နဲခြံကျွန်းနှင့် ကျွန်းငယ်အချို့မှအပ ကျန်သောကျွန်းများမှာ ကမ်းခြေနှင့်နီးသည်။ ၎င်းကျွန်းများမှာ မြောက်ဘက် မှ တောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းသည်။
ပုလောမြို့နယ်သည် မြစ်ချောင်းများပေါများသည့် ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မြစ်ချောင်းများသည် မြောက်မှ တောင်သို့ စီးဆင်း လျက်ရှိသည်။ ထင်ရှားသော မြစ်ချောင်းများမှာ ပုလောချောင်းဖြစ်ပြီး မီးကျောင်းသိုက်၊ ပုလောဖျား ကျေးရွာမှ စတင်ဖြတ်သန်း၍ ပုလော ကုန်း အနီးတွင် တွေ့ဆုံပြီး ချောင်းမကြီးတစ်လျှောက် ကပ္ပလီ ပင်လယ်ထဲ သို့ စီးဝင်ပါသည်။ ပုလောချောင်းသည် ပင်လယ်ရေ ရေတက်၊ ရေကျချောင်းဖြစ်၍ သောက်သုံး၍ မရ နိုင်ပါ။ ပုလော ချောင်းသည် နွေရာသီ ရေကျချိန်၌ ပင်လယ်ရေမြင့်အနက်မှာ ရေကျ ချိန် ပုလောချောင်းဝ၌ (၂)ပေ ခန့် သာရှိ၍ သင်္ဘောစက်လှေများ သွားလာ ခြင်း မပြုနိုင်ပါ ။
(က) ပုလောမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြစ်/ချောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ပုလောချောင်းအရှည် - ၉. ၃ မိုင်
မြစ်ဖျားခံရာဒေသ - ပုလောဖျားကျေးရွာ
ပင်လယ်သို့စီးဝင်ရာဒေသ - ပုလောမြို့၊ ရှပ်ပုံကျေးရွာ အုပ်စုရှိ ပင်လယ်ဝ
(ခ) မြို့နယ်အလိုက်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှု (မိုင်)
ပုလောမြို့နယ် -၉. ၃ မိုင်
( ဂ ) မြို့အတွင်းရှိ အခြားသောချောင်းများ
၁ မင်းထိန်ချောင်း မြောက်မှတောင် ၂.၈
၂ တိုချောင်း မြောက်မှတောင် ၄.၀
၃ ပလချောင်း မြောက်မှတောင ၄.၂
၄ တပိုချောင်း မြောက်မှတောင ၃.၉
၅ ကျောက်ကမ်းဖဲချောင်း မြောက်မှတောင ၂.၃
၆ ကြဲချောင်း မြောက်မှတောင ၃.၁
၇ သဲပုံချောင်း မြောက်မှတောင ၂.၆
၈ တောင်ယာကမ်းချောင်း မြောက်မှတောင ၃.၁
၉ ကျောက်သင်္ဘောချောင်း မြောက်မှတောင ၂.၆
ပုလောမြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေပြင် မျက်နှာပြင် အထက် ပျမ်းမျှအမြင့်(၁၂)ပေအထက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံး တောင်မှာ မှိုတောင်ဖြစ်၍ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာ ပြင်အထက် (၄၂၃၀)ပေ ရှိသည်။ မြို့နယ်၏အနိမ့်ဆုံး အရပ်ဒေသမှာ ကပ္ပလီ ပင်လယ်နှင့်ထိစပ်လျက် ရှိသည့် ရှပ်ပုံကျေးရွာ၊ လိပ်သောင် ကျေးရွာ၊ ဇရပ်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ကျောက်ကမ်းဖဲကျေးရွာ၊ မီးလောင် ချောင်း ကျေးရွာ၊ အောက်သဲပုံ ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်သည် အပူအအေးမျှတသော ရာသီဥတုရှိပြီး၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၅..c) နှင့် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ (၂၂..c) ဖြစ်ပါ သည်။ကမ်းရိုးတန်းဒေသဖြစ်သောကြောင့် မိုးများ၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရွာသွန်းသည့်စုစုပေါင်း မိုးရေချိန်မှာ ၂၀၀လက်မ ခန့်ရှိသည်
ပုလောမြို့နယ်အတွင်းပေါက်ရောက်သည့် သဘာဝ ပေါက် ပင် များမှာ ကညင်၊ တောင်ဘိန်း၊ ကဒွတ်၊ သစ်ယား၊ ဒညင်း၊ ဝါးဘိုး၊ ဝါးယား ၊ ဥပါန်း စသည်အပင်များ ပေါက်ရောက်ပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်သည် တောတောင်ထူထပ်သော ဒေသ ဖြစ်သည့် အလျောက် ဆင်၊ ပြောင်၊ ကြံ့၊ ကြံ့သူတော်၊ တောဆိတ်၊ တောင်ဆိပ်၊ ဂျေ၊ ဂျေလောင်၊ ကျားသစ်၊ မျောက်ဝံ၊ ဝက်ဝံ၊ ဒရယ်၊ သင်းခွေချပ်၊ ဖျံ၊ လိပ်၊ မြွေ အမျိုးမျိုးနှင့် ဇီဝဇိုးငှက်အချို့ တွေ့ရှိရပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်၏ လက်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေမှာ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု (၃၀.၁%) ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ကြိုးဝိုင်း သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုမှာ (၁၅.၆၃၃%) ဖြစ်ပြီး ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော ဖုံးလွှမ်းမှုမှာ (၃.၄၅၇%) ရှိပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကြိုးဝိုင်း သစ်တော (၁၀၁၇၅၃)ဧက၊ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော (၂၂၅၀၀) ဧက ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပါသည်။
ပုလောမြို့နယ်သည် ကမ်းရိုးတန်း တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်သည့် အပြင် ကမ်းခြေနှင့် ထိစပ်သော မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လကုန် အထိ ရေဘေး (၄)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးမှာ ကျပ်သန်း (၃.၃၀၀၀၀၀)၊ လေဘေး (၁၇) ကြိမ်၊ ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး ကျပ်သန်း(၃.၀၉၀၀၀၀)၊ မြေပြိုဘေး (၁၁)ကြိမ် ၊ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး ကျပ်သန်း (၇.၀၃၀၀၀၀) ရှိသည်။
လူဦးရေ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ပုလောမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ −
ကချင် − ၁၈ ဦး ၊ ကရင် −၂၆၈၈၆ ဦး
ချင်း − ၂ ဦး ၊ မွန် − ၃၈၆၁ ဦး
ဗမာ − ၁၀၈၉၂၀ ဦး၊ ရခိုင် − ၄၂ ဦး
ရှမ်း − ၂ ဦး၊ ပေါင်း − ၁၃၉၇၃၁ ဦး
ကရင် − ၂၁၈၈ ဦး၊ ချင်း − ၃ ဦး
မွန် − ၇၆ ဦး၊ ဗမာ − ၃၇၃၆ ဦး
စုစုပေါင်း ၆၀၀၃ ဦး
ကရင် − ၁၁ ဦး၊ ဗမာ − ၁၀၅၄၂ ဦး
စုစုပေါင်း− ၁၀၅၅၂ ဦး
မြို့နယ်ချုပ် ၁၅၆၇၂၅ ဦး
တရုတ် − ၁၂၃ ဦး
အိန္ဒိယ − ၉၃ ဦး
ပါကစ္စတန် − ၁၈၄ ဦး
ဘင်္ဂလားဒေရှ် − ၃၅ ဦး
အခြား − ၂၀ ဦး
ပေါင်း − ၄၅၆ ဦး
အခြား − ၄၂၂ ဦး
မြို့နယ်ချုပ် − ၈၇၈ ဦး
အိမ်ခြေ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေ၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ
အိမ်ခြေ / အိမ်ထောင်စု
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ − ပုလောမြို့နယ်တွင် မြို့ပေါ် (၅) ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၆၃)ရွာ ၌ မြို့နေအိမ်ခြေ (၃၇၀၄ )၊ အိမ်ထောင်စု (၃၇၉၆)စု၊ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၁၀၉၂)စု၊ အိမ်ထောင်စု (၂၂၀၀၈)စု ရှိသည်။
ပလောက်မြို့တွင် ရပ်ကွက်(၄)ခု ၌ အိမ်ခြေ (၁၁၁၁)၊ အိမ်ထောင်စု (၁၁၂၉)စု ရှိသည်။
ပလမြို့ တွင် ရပ်ကွက် (၄) ခု၌ အိမ်ခြေ (၁၈၅၂)၊ အိမ်ထောင်စု (၁၉၅၆)စု ရှိသည်
ပုလောမြို့နယ် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၁၁၈၀၈၅)ဦး၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ (၂၁၇၆၉)ဦး၊ ဟိန္ဒူဘာသာ(၁၀၄)ဦး၊ အစ္စလာမ် ဘာသာ(၂၂၉) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၀၁၈၇) ဦး၊
ပလောက်မြို့တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ(၃၈၁၂)ဦး၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ(၂၁၉၁)ဦး၊အစ္စလာမ်ဘာသာ(၄၂၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၆၄၂၅) ဦး၊
ပလမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ(၁၀၅၄၆)ဦး၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ(၆)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၁၀၅၅၂) ဦး၊
ပုလောမြို့နယ်လုံးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ(၁၃၂၄၄၃)ဦး၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ (၂၃၉၆၆)ဦး၊ ဟိန္ဒူဘာသာ (၁၀၄) ဦး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ(၆၅၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၅၇၁၆၄) ဦး၊
ပုလောမြို့နယ်သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင် အတွင်း တည် ရှိပြီး စီးပွားရေး အချက် အချာ ကျသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထု များသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။ ပုလောမြို့နယ်သည် ပြည်ထောင်စု လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်းများ ဖြင့်သွားလာနိုင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် သော မြို့နယ်ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်၏ အဓိကထွက်ကုန် များမှာ ရာဘာ၊ ကွမ်းသီး၊ သီဟိုဠ်၊ သားငါး၊ ပုစွန်တို့ဖြစ်ပြီး မြိတ်မြို့၊ ထားဝယ်မြို့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ အများဆုံးတင်ပို့ ရောင်းချပါသည်။
နှမ်း −( ၁၁၀) ဧက
ပဲစင်းငုံ −( ၅) ဧက
ဖူးစားပြောင်း −( ၆၀) ဧက
ငရုပ် −( ၉၉) ဧက
ဟင်းသီးဟင်းရွက် − ( ၃၉၆) ဧက
ပီလောပီနံ − ( ၉၂) ဧက
ကန်းစွန်းဥ − ( ၄၀) ဧက
ရာဘာ − (၃၃၉၅၉) ဧက
ဆီအုန်း − (၁၂၀) ဧက
သီဟိုဠ် − ( ၅၅) ဧက
မွေးမြူရေး ဇုန်များ မရှိသော်လည်း ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် −
ပုလောမြို့နယ်အနေဖြင့် ကျွဲကောင်ရေ(၅၆၄၄)၊ နွား(၅၉၈၇)၊ ၀က် (၂၂၈၁၀)၊ ဆိတ်(၉၁၂)၊ ကြက်(၁၇၃၁၀၂)၊ ဘဲ(၂၁၇၅၆၈)၊ ကြက်ဆင်/ ဘဲငန်း(၂၃၄၈) ။
ပလောက်မြို့တွင် ကျွဲကောင်ရေ (၄၈၇၄)၊ နွား(၅၅၃၆)၊ ၀က် (၁၁၉၂၀)၊ ဆိတ်(၇၉၆)၊ ကြက်(၁၁၂၇၄၈)၊ ဘဲ(၄၃၀၀) ။
ပလမြို့တွင် ကျွဲကောင်ရေ (၃၄၉)၊ နွား(၃၀၀)၊ ၀က် (၂၁၃၈)၊ ဆိတ်(၄၆)၊ကြက်(၂၀၇၉၀)၊ ဘဲ(၁၉၆၅) ။
မြို့နယ်ချုပ်အနေဖြင့် ကျွဲကောင်ရေ (၁၀၈၆၇)၊ နွား(၁၁၈၂၃)၊ ၀က် (၃၆၈၆၈)၊ ဆိတ်(၁၇၇၂)၊ ကြက်(၃၀၆၆၄၀)၊ ဘဲ(၂၈၀၂၃)၊ ကြက်ဆင်/ ဘဲငန်း(၂၃၄၈)
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပုလောမြို့နယ်အနေဖြင့် ပုစွန် မွေးမြူရေး (၆၅.၀၇ ) ဧကတွင် (၃၃) တန် မွေးမြူနိုင်ခဲ့သည်။
ပုလောမြို့နယ် တွင် စက်မှုဇုန်များ၊ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ မရှိသော် လည်း အိမ်တွင်းစက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းများ−
(၁)စက်ချုပ်လုပ်ငန်း − (၄၆)ခု
(၂)ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း − ( ၃)ခု
(၃)ပန်းဘဲလုပ်ငန်း − ( ၂)ခု
(၄)မုန့်လုပ်ငန်း − (၇)ခု
(၁)စက်ချုပ်လုပ်ငန်း − (၂၈)ခု
(၂)ပန်းဘဲလုပ်ငန်း − (၁)ခု
(၃)မုန့်လုပ်ငန်း − (၁)ခု
(၁)စက်ချုပ်လုပ်ငန်း − (၁၄)ခု
(၂)ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း − ( ၂)ခု
(၃)ပန်းဘဲလုပ်ငန်း − ( ၁)ခု
(၄)မုန့်လုပ်ငန်း − (၄)ခု
(၁)စက်ချုပ်လုပ်ငန်း − (၈၈)ခု
(၂)ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း − ( ၅)ခု
(၃)ပန်းဘဲလုပ်ငန်း − ( ၄)ခု
(၄)မုန့်လုပ်ငန်း − (၁၂)ခု
ပုလောမြို့နယ်၏ မြေအမျိုးအစားအလိုက် အသုံးချထား သည့် ဧကအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်-
(၁) လယ်မြေဧရိယာ − (၂၄၂၁၄) ဧက
(၂) ဥယျာဉ်ခြံမြေ −(၅၂၈၁၂) ဧက
(၃) ဓနိ −(၂၉၂၃) ဧက
(၄) တောင်ယာ − (၅၄) ဧက
(၅) လှပ်ထားမြေ ဧရိယာ −(၁၃၇၅ ) ဧက
(၆) စားကျက်မြေ −(၅၄၀၀) ဧက
(၇) မြို့မြေ −(၅၃၆) ဧက
(၈) ရွာမြေ −(၈၄၅) ဧက
(၁၀) အခြားမြေ −(၇၈၃၅၀)ဧက
(၁၁) ကြိုးဝိုင်း /ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော −(၁၀၃၇၁၃)ဧက
(၁၂) တောရိုင်း −(၈၂၁၉၆) ဧက
(၁၃) မြေရိုင်း −(၃၄၁) ဧက
(၁၄) စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သော ဧရိယာ −(၅၅၅၃၀)ဧက
ပုလောမြို့နယ်ချုပ် အနေဖြင့် −(၄၀၈၂၈၉) ဧက ရှိသည်။
ပုလောမြို့နယ်ကိုကျေးရွာအုပ်စု ၂၇ ခုခွဲထားသည်။ ထိုအုပ်စုများထဲမှ ၆ ခုသည် မြောက်ဘက်သုံးပုံတစ်ပုံတွင်တည်ရှိသည့် ပုလောက်မြို့နယ်ခွဲ သို့ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပလောက်မြို့မှအုပ်ချုပ်သည်။
ဖိုးရှမ်းဘုရား ကမ်းခြေ (ရှပ်ပုံကျေးရွာ)
မိုးမခ ကမ်းခြေ (ဖော့ကျေးရွာ)
မီးလောင်ချောင်းရေတံခွန် ( မီးလောင်ချောင်းကျေးရွာ)
ဘုရားဒပ် ကမ်းခြေ (လက္ကူးကျေးရွာ)
"Tanintharyi Region PCodes"၊ မြန်မာ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု ယူနစ် (MIMU)၊ September 2017၊4March 2019 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 19 December 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
http://www.mrtv3.net.mm/newpaper/159newsn.pdf%5Bလင့်ခ်သေ%5D Page 11 Column 2